Senator Dufle: ”Ma jirto wax la isla go’aamiyay oo 4.5 lagu kala qeybsado gobolka Banaadir”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Senator Dufle: ”Ma jirto wax la isla go’aamiyay oo 4.5 lagu kala...
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa maalmihii dambe soo ifbaxayay dood ka dhalatay soo jeedin aheyd in Gobolka Banaadir la siiyo todobo xubnood oo ay ku yeelan doonaan Aqalka sare ee dalka, islamarkaana lagu qaybsan doono todobadaasi xubnood 4.5 ayaa arrintaasi waxaa si adag uga hadlay Senator Cusmaan Maxamuud Dufle.
Senator Dufle ayaa ka mid Guddiga Isku dhafka ee Arrimaha Doorashooyinka, waxaana muddooyinkii dambe uu ka qayb galaayay kulamada looga hadlaayay arrimaha Gobolka Banaadir ee ay guddiga yeesheen.
Wuxuu Dr. Dufle sheegay in uusan jirin go’aan mideysan oo arrimaha gobolka Banaadir ay ka soo saareen xubnaha guddiga, balse 7 xubnood ay tahay arrin soo jeedin ah, go‘aankana ay leeyihiin Baarlamaanka Federalka Soomaaliya.
Beelaha deegaan ahaan ka soo jeeda Gobolka Banaadir ayaa si wayn uga carooday in 4.5 lagu qaybsado 7 xubnood oo la sheegay in lagu kordhin doono Aqalka sare, waxaana Mataladaasi heli doona Gobolka Banaadir.
Ugu dambeyn, Aqalka Sare ayaan hadda wax matalaad ah ku laheyn Gobolka Banaadir, balse lama oga go‘aanka Baarlamaanka Soomaaliya ay ka qaadan doonaan arrintaan.
Senator Cusmaan Maxamuud Dufle